Mozilla waxay cusbooneysiineysaa astaanta si ay u muujiso dareenkeeda waxa internetka yahay | Abuurista khadka tooska ah
5 bilood kahor Mozilla waxay codsatay caawimaad dadweynaha lugeynaya sidaa darteed go'aan ka gaadho mid ka mid ah astaamaha kuwaasoo la tusay inay yihiin musharraxa ugu dambeeya ee beddeli kara kan hadda jira. Waxay nagala yaabeen nashqado taxane ah oo aan waxbadan ka qaban wixii aan marwalba la xiriirayna astaantaan, sidaa darteed way fududahay in la xusho inyar oo noqon karta xulkii ugu dambeeyay ee astaanta cusub.
Toddoba bilood ka dib hawsha loogu talagalay cusbooneysii khibradda sumcadda Mozilla, maanta aqoonsiga nooca cusub ayaa la muujiyay kaas oo ay ku nuuxnuuxsanayaan sida ay u fahmaan software-ka maanta. Astaan ​​si wanaagsan loo calaamadeeyay oo madow ah oo laba ka mid ah astaamaheeda ay u taagan yihiin inay sameystaan ​​nooc emoticon wareega ah.
Fikraddu waa taa astaanta sheeg himilooyinkaaga marka la eego internetka iyo inay yihiin horudhac kheyraadka dadweynaha ee caafimaadka qaba, oo u furan oo ay wada heli karaan.
Iyada oo xarfaha cad ay ku qoran yihiin leydi madow, fikradda ayaa ah in aan u fahamno Mozilla inay tahay mid ka mid ah ciyaartoy fure u ah internet caafimaad qaba. Internet taas oo aan dhamaanteen awoodno inaan ku xorowno si loo baadho, loo ogaado, loo abuuro loona ikhtiraaco caqabado la'aan iyo xaddidaad la'aan. Meel bannaan oo loogu talagalay dhammaan awoodda ay ku jirto gacanta dad badan, oo aan ahayn dhowr.
Xilliga amniga iyo sirta ay waxyeello u geysanayaan dhaqdhaqaaqyada qaarkood ee shirkadaha qaarkood, Mozilla ayaa dooneysa ka qayb qaado ilaalinteena, amniga iyo aqoonsiga si had iyo jeer loo ixtiraamo.
Urur aan faa'iido doon ahayn oo gaar ahaan ah loo tababaray abuurka alaabada, tikniyoolajiyadaha iyo barnaamijyada ka dhigaya inuu internetku sii kordho oo caafimaad qabo, sidaas darteed astaantan ayaa isku dayeysa inay isu keento wax kasta oo lagu sheegay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Mozilla waxay soosaartay astaan ​​cusub
Waxay u egtahay biraawsar barnaamijyada
Jawaab Ruben DG